Dagaalkii Difaaca Dadka ee Myanmar: Baaqa Rasmiga ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Burburinta Myanmar » Dagaalkii Difaaca Dadka ee Myanmar: Baaqa Rasmiga ah
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Wararka Burburinta Myanmar • News • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Myanmar ayaa ku dhawaaqday dagaal
Dadaaladii diblomaasiyadeed ee Myanmar (Burma) ee lagu soo afjari lahaa la wareegidda milateriga iyo qalalaasaha ayaa fashilmay, in kasta oo ay jiraan cunaqabatayn ka timid waddamada reer Galbeedka iyo cadaadis kaga yimid deriska Koonfur-bari Aasiya.
Maanta “dagaal difaac dadweyne” ayay ku dhawaaqday Dowladda Midnimada Qaran ee Myanmar.
Dowladda Midnimada Qaran ee Myanmar (NUG) ayaa ku dhawaaqday in la bilaabay dagaal difaac dadweyne oo ka dhan ah taliska milatariga subaxnimadii Talaadada.
Ku -simaha madaxweynaha NUG ee Duwa Lashi La ayaa ugu baaqay muwaadiniinta dalka oo dhan inay “kacdoon ka dhan ah xukunka argagixisada milatariga oo uu hoggaaminayo [hoggaamiyaha afgambiga] Min Aung Hlaing gees walba oo dalka ah.”
Wuxuu ku dhawaaqay Xaaladda Degdegga ah ee dalka si loo tirtiro kaligii taliskii milatari.
Dowladda hooska Myanmar ayaa ku dhawaaqday “dagaal difaac dadweyne” oo ka dhan ah milatariga dalkaas, oo awoodda ku qabsaday afgambi 1 -dii Febraayo.
Duwa Lashi La, oo ah ku simaha madaxweynaha Dowladda Midnimada Qaran (NUG), oo ay sameysteen xildhibaanno xilka laga qaaday, ayaa ku dhawaaqday fiidyow la soo dhigay Facebook Talaadadii.
Wuxuu ku tilmaamay hoggaamiyaha militariga argagixiso markii uu abaabulayay Ciidanka Difaaca Dadweynaha.
Iyada oo ay masuuliyad ka saaran tahay ilaalinta nafta iyo hantida dadka, Dawladda Midnimada Qaran…
Maadaama ay tani tahay kacdoon dadweyne, dhammaan muwaadiniinta ku nool guud ahaan Myanmar, waxay ka soo horjeedaan xukunka argagixisada milatariga ee uu hoggaaminayo Min Aung Hlaing gees kasta oo dalka ah. ”
Myanmar ayaa ku jirtay qalalaase tan iyo afgambigii uu hogaaminayay Sarreeye Guud Ming Aung Hlaing. Qabsashada awoodda ayaa kicisay mudaaharaadyo baahsan iyo dhaqdhaqaaq caasinimo shacab ah, laakiin ciidamada ammaanku waxay la dagaallameen xoog waxashnimo ah, oo ay ku dhinteen boqolaal kuna xireen kumanaan qof.
#Waxay ku dabbaashayaanMinyaniya